DEG DEG: Cabdinaasir Seerar oo kaga dhawaaqay Kismaayo war deg deg ah & Halis xagga amaanka ah.
KISMAAYO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in berrito uu sheegay Cabdinaasir Seerar oo horey u sheegtay in uu yahay Madaxweynaha Jubbaland uu berri is caleema-saari doono, waxaana uu sheegay in uu socdaal kumarayo xaafadaha magaalada Kismaayo.
Walaac xagga ammaanka ah ayaa laga muujiyey arrimahan, iyadoo horey Jubbaland u soo rogtay amaro ku wajahan in aan cidna ku qabsan karin gudaha magaalada wax kulan iyo xaflad ah oo aysan dhankooda ogeyn.
Cabdinaasir Seerar ayaa ciidamo ku haysta gudaha magaalada Kismaayo, waxaana dad badan ay ka walaacsan yihiin xaaladdah rasmiga ah ee kataagan gudaha magaaladaas.
Ka qeybgalayaashii caleema-saarka Axmed Madoobe oo ah dhamaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ayaa kusugan gudaha magaalada Kismaayo, waxaana ay dadaal xoog badan ku bixinayaan sidii ay meelmar uga dhigi lahaayeen in ay dhinacyadan wada xaajoodyo siyaasadeed yeeshaan.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa maanta sheegay in loo baahan yahy in Axmed Madoobe mar kasta albaabkiisu uu furnaado, isagoo sheegay in ay ku howlan yihiin sidii heshiis dhinacyada oo dhex dhigi lahaa.
Seerar wuxuu horey u soo ahaa xubnihii wax ka qabsaday magaalada Kismaayo, Afhayeenkii hore ee Jubbaland iyo sidaas oo kale saaxiibka AXmed Madoobe, balse ay kala xariir furteen dhawaan markii ay soo dhawaatay tartanka doorashada.